Ambongadiny miloko miolakolaka miolakolaka hety miendrika biby mpanamboatra hety mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
Modely ： IC-65C
Loko: Mainty, Mena, manga, maintso, volamena, mavokely
● Ity dia iray amin'ny hety miolakolaka 6.5 santimetatra tsara indrindra. Ny hety dia vita amin'ny lelan'ny vy vy SUS440C sy ny fitoeran-aluminium. Misy tahony miloko enina azonao isafidianana: mainty, mena, maintso, manga, volamena ary mavokely. 30 degre ny avolantsara, noho izany dia mety amin'ny fanapahana radianisma, toy ny vava, loha, valahana sns.
● Ny hety hety dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 440C nafarana avy any Japon ary namboarina tamin'ny mombamomba ny Japoney Ny tsipika fanapahana hety dia mitovy, ary ny lelany dia malama, maranitra ary mateza. Milamina sy mitovy ny atin'ny ravin'ny hety ary mampihena mora ny fikorontanana sy ny fanapahana.
● Ny ampahany tantana dia vita amin'ny alimina habakabaka, izay maivana kokoa ary tsy ho reraka aorian'ny fampiasana maharitra. Ny taham-pahefana ergonomika dia mety hahatonga ny hety hitehirizana asa bebe kokoa amin'ny fizotran'ny fampiasana, hisorohana amin'ny fomba mahomby ny fipoahan'ny aretina tampoka. Ny tantana dia mandray ny volavolan'ny fantsika misy rambo roa, miondrika symmetrika ary nendahana ho endrika "A", mety amin'ny tanana havia sy havanana. Na ny forehand na ny backhand dia azo ampiasaina hanatrarana vokatra misy tanjona maro. Mahomby tokoa.
● Fitaovana hety - Ny hety tsirairay avy dia misy lamba fanadiovana hety sy mpanitsy visy. Ny antsipirian'ny olombelona tadiavinao dia noheverinay ho anao.
Space Aluminium Tanana
Teo aloha: Volavolan-tsolika noforonina kilasika miendrika volon-koditra vita amin'ny biriky manga
Manaraka: Andiam-bolo vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana vita amin'ny tànana miolakolaka
SUS440C fikolokoloana biby fiompy matihanina Super Curved ...